LA ISKUMA SALAAMIN: ”Maxi Lopez waa jaahil” – Icardi & Max oo aan mar kale isa salaamin! + Sawirro – Gool FM
LA ISKUMA SALAAMIN: ”Maxi Lopez waa jaahil” – Icardi & Max oo aan mar kale isa salaamin! + Sawirro
Raage April 4, 2016
(Milano) 04 Abriil 2016 – Mauro Icardi ayaa bansiin kusii shubay dabkii ka dhex shidnaa isaga iyo Maxi Lopez oo uu ku tilmaamay “jaahil” kaddib markii uu markale salaan ka diidey.
Labada nin ayaa mar ahaan jirey saaxiibbo isku dhaarta mar ay sidoo kale isla joogeen kooxda Sampdoria, iyagoo xitaa fasax isla aadi jirey, balse wuxuu ceeshoow milixaasi colaad isu bedeley markii uu Icardi uu Maxi u daba mareeyay xaaskiisa Wanda Nara oo uu haatan qabo Icardi.
Kulankii fiidkan ee Inter ay Torino kula yeelatay San Siro ayaa ka hor inta aan la baasanin wuxuu Maxi Lopez ka dhaartay inuu gacan qaado Icardi oo sida la dareemi karo dabcan meel xun ka maray.
Waa markii 2-aad oo ay tani dhacayso, waayo sanadkii tegeyna sidan oo kale ayay ahayd.
“Nasiib xumo waxyaabahan oo kale way dhacaan, waxayna ku xiran tahay jaahilnimada ragga qaarkood,” ayuu Icardi ku yiri Mediaset Premium oo uu kaambiyadii u warramay. “Salaan baan u taagey, anigu waxaan ahay nin edeboon.” ayuu raacshey.
Wanda iyo carruurteeda – 3 uu dhalay Maxi, iyo mid uu dhalay Icardi – ayaa kaaga darane tarabuunka San Siro saarnaa si ay ugu sacbiyaan kooxda Icardi ee Inter.
Yeelkeede, waxaa qosolka ku dambeeyay Max Lopez oo dhulka ku jiidey Icardi iyo kooxdiisa Inter oo ay 2-1 kaga adkaadeen, iyadoo ay weliba laba goolba ka yimaadeen kubado uu sallaxay Maxi.
SERIE A: Torino oo Inter taayarrada ka toogatey + Sawirro
Waxyaabihii laga bartay kulankii EPL ee ay Man United guusha ka gaartay kooxda Everton… (Muxuu ka dhignaa goolkii madiga ahaa ee Martial?)